Sukoon Baag - Stone House - I-Airbnb
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Shashi
Isikhala senze ngokucophelela izinto zangaphakathi ezinombono we-minimalist. IyiNdwendwe engu-700 Sq ft. 1 BHK enefenisha ngokugcwele ngesitayela sendlu yasepulazini ebukekayo. Kuyinhlanganisela yobuciko bolimi lwendabuko kanye nokunethezeka ukwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo ngokwedlulele. Ngaphandle kwedeski elisebenzayo, ivulandi, amasofa okuzilibazisa abheke efasiteleni kanye neshalofu lezincwadi elilayishiwe, izivakashi zizokwazi ukufinyelela ekhishini elincane elinazo zonke izinto eziyisisekelo kanye nendlu yokuwasha yangasese.
I-Sukoon Baag iyindawo yokuhlala yasekhaya esesimeni esihle. Itholakala ngaphakathi kwepulazi eduze komhosha, umuntu angathola ukuba yedwa phakathi kwemvelo.Izungezwe izintaba ezinhle zase-Dhauladhars.
Kunezindlela eziningi ezinhle zasemakhaya ezikumema ukuthi uthathe uhambo olude ungenalutho ngaphandle komsindo wemvelo nokuphefumula kwakho okukuphelezele. Umuntu angehla imizuzu emi-5 ukuze azicwilise emfuleni noma afike empophomeni edumile yase-gunehar phakathi nemizuzu engu-15. Zizwe ukhululekile ukwenza i-yoga engadini evundile ezungeze indawo noma usiboleke isandla ngenkathi sisebenza endaweni yethu yemifino. Ukuhlala kwakho lapha kuzokunikeza ulwazi oluyiqiniso kakhulu lwempilo yasesigodini sase-Himachali.
I-Bir iyisikhungo esiphawulekayo se-ecotourism, izifundo zomoya, izindela zamaBuddha nokuzindla. Ngaphandle kwalokhu, i-Bir isidume kakhulu eminyakeni edlule ngemisebenzi ye-paragliding ne-adventure. Indlu ilungele abantu abafuna ukuhlala endaweni engayodwana kude nayo yonke imisebenzi yezivakashi, futhi nokho kube ku-3km noma imizuzu eyi-15 kuphela ukusuka endaweni okufikela kuyo e-bir.
Isikhala senze ngokucophelela izinto zangaphakathi ezinombono we-minimalist. IyiNdwendwe engu-700 Sq ft. 1 BHK enefenisha ngokugcwele ngesitayela sendlu yasepulazini ebukekayo. Kuyinhlanganisela yobuhle bendabuko kanye nokunethezeka ukwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo ngokwedlulele. Ngaphandle kwedeski elisebenzayo, ivulandi, amasofa okuzilibazisa abheke efasiteleni kanye neshalofu lezincwadi elilayishiwe, izivakashi zizokwazi ukufinyelela ekhishini elincane elinazo zonke izinto eziyisisekelo kanye nendlu yokuwasha yangasese. Ifakwe ngokuyisisekelo ngazo zonke izinsiza umuntu azidingayo ukuze uhlale ukhululekile futhi uzimele. Izivakashi zizoba nobumfihlo obuphelele kanye nokufinyelela okuqondile ekotishi.